ပြည်တွင်းရှိ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဆိုင်တချို့ တင်သွင်းမည့် iPhone5ဈေးနှုန်းများအလွန်မြင့်မားကြောင်းသိရသည်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computer & Cell Phone » ပြည်တွင်းရှိ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဆိုင်တချို့ တင်သွင်းမည့် iPhone5ဈေးနှုန်းများအလွန်မြင့်မားကြောင်းသိရသည်။
ပြည်တွင်းရှိ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဆိုင်တချို့ တင်သွင်းမည့် iPhone5ဈေးနှုန်းများအလွန်မြင့်မားကြောင်းသိရသည်။
Posted by အာဂ on Sep 18, 2012 in Computer & Cell Phone, Computers & Technology, Myanma News | 24 comments
ခိုးကူးတင်ပြ မောင် အာဂ
ထို့ကြောင့် ဈေးနှုန်းအနိမ့်ဆုံး နှင့် US မှ မှာယူတင်သွင်းပေးမည်ဟု ကြော်ညာထားသော ဆိုင်မှ ဈေးနှုန်များကို မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။
16 (GB) – 773,000 Ks
32 (GB) – 879,000 Ks
64 (GB) – 995,000 Ks
ဒါကတော့ Yangon online store ကနေမှာ US ကနေမှာယူပေးမယ့်ဈေးနှုန်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်အွန်လိုင်းစတိုးကနေမှာယူမယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းတန်ဖိုးရဲ့တဝက်ကို စရံအနေနဲ့ပေးချေရမှာဖြစ်ပီး ကျန်တဝက်ကိုတော့ ဖုန်းရောက်မှပေးချေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းရောက်ရှိမယ့်ကြာချိန်ကတော့ မိမိမှာယူချိန်ကနေစပီးတော့ ၃ပတ်ကနေ ၄ ပတ်အတွင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ။
အောက်မှာတော့ ရန်ကုန်အွန်လိုင်းစတိုးကိုဆက်သွယ်ရမယ့် လိပ်စာများဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားပါက ဖုန်းနှင့်သော်လည်ကောင်း အီးမေလ်းနှင့်သော်လည်းကောင်းဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ
No.(59/B), Yaw Min Gyi (York) Street, Dagon Township, Yangon, Myanmar., Dagon, Yangon, Burma, 11191
09-73002215 , 09-73164534
ဆက်သွယ်ရမယ့် မေလ်းကတော့ sales@yangononlinestore.com ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်တော် ရန်ကုန်အွန်လိုင်းစတိုးနှင့်မည်သို့မှမပတ်သပ်ပါ….မြန်မာပြည်က ဖုန်းခရေဇီများအရိုက်ခံရမည့်အရေးကိုတွေ့မြင်နေသောကြောင့်ဒီပိုစ့်ကိုတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ…အိုင်ဖုန်းခရေဇီ များဈေးနှုန်းများကိုစဉ်းစားခြင့်ချိန်ပီးဝယ်နိုင်ကြပါစေဗျာ….
Reference and Credit to -Aung Aung Tun[Myanmar Mobile App Group]
၀န်ခံချက်။ ။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး။ပြည်တွင်းကလူတွေ သိသင့်တယ်ထင်တယ်ရယ်။ ပျင်းတာနဲ ခိုးကူးတင်ပြလိုက်တာပါ။
မှာချင်ရင် ၅၀% ကြိုပေး… တစ်လအတွင်းရောက်မယ်…
ကိုဖက် အချင်းချင်းတွေဆိုတော့လေ…။ ဟို ဟာလေ… ။ အဟီး အားလည်းနာပါတယ်။ အဟိ… ဟိုဟာလေ..။ ၁၀% ကြိုပေးပြီး တစ်လအတွင်းရောက်မှ…။ တစ်နေ့ တစ်ထောင်နှုန်းလေးများ သွင်းလို့ရမလားလို့..လေ။ အဟီး…အားလည်းနာ ပါတယ်။ ..အဟိ
O …… အားမနာပါနဲ့ ရပါတယ် ရပါတယ် အချင်းချင်းတွေပဲဟာ
ဦးကြီးဖက်က စဉ်းစားပေးမှာပေါ့ ဟိ ….
အမလေးးးးးးးးး သဲ၊အုတ်၊ကျောက်၊ဘိလပ်မြေ :|:
ဖေ့စဖုတ် မှာ သူများ တွေ ပလူပျံအောင် ရှဲထားတာလေးတွေ့လို့ ..
ကရဲစည် နဲ့ ကဖတ်ကတ် တို့ … ထသတ်ကုန်ရင် တာဝန်မယူပါ…
Samsung : မင်းရဲ့နည်းပညာကို ငါမခိုးပဲနဲ့ ငါ့ကိုတရားဆွဲတယ် မင်းကကလိမ်ကကျစ်
iPhone : မင်းကငါ့နည်းပညာကိုမခိုးပေမယ့် တစ်ဖြည်းဖြည်းတူအောင်လိုက်လုပ်လာတာတော့ သုံးတဲ့သူတွေသိတယ် iOS တွေက အရင်ကတည်းက ဒီစတိုင်ပဲ
Samsung : မင်းထုတ်တဲ့ OS တွေက ဘာမှလည်းထူးထူးခြားခြားတိုးတက်မလာဘူးဆိုတော့ Customer ကိုလှည့်စားနေတာလား
iPhone : ငါက Feature များများမတိုးဘူး တိုးရင်လည်းတစ်ခုတည်းနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် အံ့သြသွားစေမယ့်အရာပဲလုပ်တယ် i Family အနေနဲ့ကိုယ်ပိုင် OS ကိုပဲသုံးတာ ပထွေးကိုအဖေမခေါ်တတ်ဘူး
Samsung : မင်းရဲ့ app store က User တွေအကောင့်ဖွင့်ရတာမခက်ခဲလွန်းဘူးလား
iPhone : Google Play ထက်တော့ Smart ကျတာအမှန်ပဲ
Samsung : memory ထပ်တိုးလို့ရမယ်ဆိုရင် ကောင်းမယ် မင်းတို့အိုင်ဖုန်းတွေ
iPhone : memory ထပ်စိုက်ရင် OS မှာ Extrnal source အတွက်အများကြီးထပ်ရေးရဦးမယ် ကတ်အရည်အသွေးပေါ်မူတည်ပြီး အရာအားလုံးပြောင်းလဲနေမယ် နောက်ဆုံးမင်းလို ဟန်းသွားမှာပေါ့
Samsung : မင်း app တွေကသွင်းရတာခက်ခဲလွန်းပါတယ်ကွာ
iPhone : သွင်းပြီးသွားရင်လည်း ဘာမှချေးမများဘူး iproduct အားလုံးနဲ့အံဝင်ပြီးသား ဟိုဖုန်းမှာမရတာ ဒီစက်မှာမရတာမဖြစ်ဘူးမင်းတို့ app ကမှအကုန်သွင်းလို့ရတယ် ဒါပေမယ့် အားလုံးပေါ်မှာ run လို့မရဘူး
Samsung : Custom Firmware တင်ရင် ကြောင်တတ်တယ်ဆို
iPhone : Official တင်လည်းကြောင်တာ မင်းတို့ Android လေ
Samsung : ငါတို့မှာ Rooting Tool တွေအများကြီးကွ ကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်
iPhone : မလိုပါဘူး OS တစ်ခုအတွက် Root တစ်ခုတော်ပြီပေါ့
Samsung : ခုချိန်မှာမင်းတို့ စတိဗ်ဂျော့ပ် အသားကုန်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သမိုင်းတစ်လျောက်နာမည်ရတဲ့နည်းတူ ငါတို့ Samsung ကအချိန်တိုလေးနဲ့နာမည်ရလာတာ မရှက်ဘူးလား
iPhone : Google ဆိုတာကဂုရုကြီးလေ ငါတို့နဲ့ တစ်တန်းတည်းတွေပေါ့ ငါတို့က အစကတည်းက ကိုယ်ပိုင် OS ကိုယ်ပိုင် Store နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန်တွေ ရှိထားပြီးသား မင်းက ငါနဲ့တစ်တန်းတည်းကောင်တွေ လုပ်တဲ့ OS နဲ့ Store ကိုသုံးနေတာ ငါ့ရဲ့ တူအဆင့်လောက်ပဲရှိပါတယ် နာမည်ရတာလည်းမဆန်းပါဘူး
Samsung : Nokia ကိုတောင်ကျုပ်ခေါက်ထားနိုင်ခဲ့တာ ခင်ဗျားလုပ်နိုင်ခဲ့လို့လား
iPhone : Bill Gates နဲ့ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့တစ်နေ့ မင်း Nokia လက်အောက်ရောက်ဦးမယ်ထင်တယ်
Samsung : ငါတို့ Developer တွေကတော်တယ် app တွေအများကြီးရေးနိုင်တယ် လိုချင်တာရတယ်
iPhone : ငါတို့ကတော့ လိုချင်တာ ပေးနိုင်ဖို့ထက် လိုအပ်တာကိုရေးပြီး သွက်လက်တိကျမြန်ဆန်ပြီး ချောမွေ့ဖို့အဓိကထားတယ်
Samsung : nano sim card ကအောင်မြင်မယ်ထင်နေလား စတန့်ထွင်လွန်းတယ်
iPhone : မင်းတို့ကအစ ငါတို့စတန့်နောက်လိုက်လာတာပဲမဟုတ်လား မင်းတို့သာ nano နဲ့ခပ်ဆင်ဆင် idea လိုပ်မလုပ်ပါစေနဲ့လို့ပဲဆုတောင်းရမှာပေါ့
Samsung : ငါတို့က Open Source ကွ အကုန်လုံးလွပ်လွပ်လပ်လပ်ပဲ
iPhone : ငါတို့ကတော့ OS ကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတယ် Technology ကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတယ် Developer တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်တယ် User တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတယ် ဈေးကွက်ကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတယ် ဘာဆိုဘာမှမလွပ်လပ်ဘူး ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ထိ အမှာစာတွေဆက်တိုက်ရောက်နေတဲ့လျို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေတယ်
Samsung : ဘာလဲ
iPhone : မင်းဥာဏ်မီလာတဲ့တစ်နေ့ကျရင် မင်း Open ထားသမျှ အကုန်ပိတ်ပြစ်လိမ့်မယ် ပြီးတော့ ငါတို့လိုပဲ တစ်ခုဆိုတစ်ခု ကျကျနနလုပ်တတ်လာလိမ့်မယ်
(ဂလက်ဆီ ယူဇာတွေ ၀ိုင်းဆဲကြဇေသဒီး…)
ကျုပ်သာ ပိုစ့်ပိုင်ရှင်ဆိုရင် အပေါ်ကကော်မန့်ကို BC ပေးတယ်… စိမ်းပြစ်တယ်ဗျာ…ဟိဟိ
အဓိက ကတော့ iphone5မှာ သုံးရမယ့် nano sim card ကြောင့် ပြည်တွင်းက အသုံးပြုလို့ လောလောဆယ် အဆင်မပြေနိုင်သေးပါဘူး iphone4မှာ သုံးခဲ့ တဲ့ micro sim card ထက် ပိုသေးပြီး ပိုပါး နေလို့အဆင်မပြေနိုင်သေးပါဘူး
အခုလို သေချာပြောပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ …….. ၀ယ်မယ်လုပ်နေတာ ၀ယ်မိရင်တော့ ငါးဗန်းမှောက်ဦးမယ် … ဟဲ ဟဲ ကြုံတုန်းလေးကြွားတာ တကယ်မထင်နဲ့ ……….
တော်ပြီး လက်ရှိလေးနဲ့ပဲကျေနပ်နေလိုက်မယ်. သူ့ဝယ်မယ့်အစား ရွှေတကျပ်သားပဲဝယ်မယ်.
အဲဒါပိုကောင်းတယ်။ ဘယ်တော့မှ မရှုံးနိုင်တဲ့ ရင်နှီးမှုပဲ..။
သူဝင်ရင် လိုင်းကန်ပနီနဲ့ရော ခွက်ဒစ်ကန်ပနီနဲ့ပါ ချိတ်ဆက်ပြီး ၂နှစ် ပလဲန် နဲ့ရောင်းပေးမယ်ဆို
ကနဦး ကုန်ကျငွေ မများဘဲ သုံးနိုင်မယ် လို့ မြင်ပါကြောင်း
ဖုန်း နဲ့ ပါတ်သတ်လို့ဒီ လင့်ကို သွားလိုက်ပါ ကျွန်တော့် ဆရာသမား အစ်ကို တွေလုပ်ထားတဲ့ဆိုဒ်ပါ application တွေကို free ရအောင် crack လုပ်ထားတာတွေပါ တော်တော်ပြည့်စုံပါတယ် ပန်းသီးသမားတွေရော စက်ရုပ် သမား တွေအတွက်ရော အဆင်ပြေကြမှာပါ အဲဒီဆိုဒ်က မြန်မာလူမျိုး cracker ကြီးတွေရဲ့ ကြိုးစားမှုတွေပါ ။ စတင်တာမကြာသေးလို့လိုအပ်ချက်များရှိရင် သည်းခံ ပေးကြပါဗျို့ 
by ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန)
Iphone တော့ရောင်းစရာမရှိဘူးဗျား မြန်မာ Sim Card တော့ရောင်းစရာရှိတယ်။
ပိုက်ဆံကြိုတင် တစ်ဝက်သွင်းထားရမယ် ။ ကျန်တဲ့တစ်ဝက်ကိုတော့ ပစ္စည်းရမှပဲထပ်ပေးရမှာပါ။
မြန်မာ Sim card တစ်ခု ၃၀၀၀၀ သုံးသောင်းကျပ်နှုန်းဖြင့် ပထမဆုံးစာရင်းပေးသူ ၁၀ ဦးသာ။
ပစ္စည်းရမည့်နေ့။ ။ မြန်မာ ၅၀၀၀ တန်ဆင်းကဒ်ထွက်သည့်နေ့တွင်ရမည်။
စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့က iPhone5ကိုတရားဝင်ကြေညာလိုက်တဲ့အခါ iPhone5မှာအသုံးပြုရမယ့် SIM Card အမျိုးအစားကို Nano SIM Card ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်တာကို အားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Nano SIM Card ကိုအသုံးပြုတာ iPhone5ကပထမဆုံးဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာမှာတောင် Nano SIM ကစတင်သုံးစွဲခြင်းမရှိသေးတဲ့အနေအထားမှာပါ။ ဒီအချိန်မှာ iPhone5က Nano SIM Card အရွယ်အစားကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းကို Apple ကတရားဝင် Event မှာကြေညာလိုက်တဲ့အခါ နိုင်ငံတကာက ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးများကလည်း မိမိတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေက Mobile Users တွေ iPhone5ကိုအသုံးပြုလို့ရစေဖို့အတွက် Nano SIM Card များကိုအပူတပြင်းထုတ်လုပ်ကြရတဲ့အထိ Nano SIM ကအကျိုးသက်ရောက်မှုကြီးသွားပြီး Mobile SIM Card တွေရဲ့ရေစီးကြောင်းတစ်ခေတ်ပြောင်းတော့မယ့်အနေအထားကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် iPhone5ကလောလောဆယ်ဈေးကွက်ထဲကိုရောက်ရှိမလာသေးတာကြောင့် လက်ရှိသုံးစွဲနေကြတဲ့ SIM Card /Micro SIM Card များကို Nano SIM အဖြစ်ဖြတ်တောက်သုံးစွဲနိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ ဝေဖန်သံများ ၊ ဆွေးနွေးသံများဟာလည်း ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ မိုဘိုင်းလောကရဲ့ စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတဲ့ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မိုဘိုင်းဈေးကွက်ထဲကို SIM Card ကို Nano SIM Card အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ့် Nano SIM Card Cutter များလည်း ဈေးကွက်ထဲကိုဝင်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီ Cutter တွေက လက်ရှိ SIM Card တွေကို Nano SIM Card ရဲ့အရွယ်အစားအတိုင်းဖြတ်တောက်ပေးနိုင်တာမှန်ပေမယ့် iPhone5မှာအသုံးပြုရမယ့် Nano SIM အရွယ်အစားက လက်ရှိ SIM Card များထက် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပိုပါးတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ သို့သော် iPhone5က ဈေးကွက်ထဲရောက်ရှိမလာသေးတာမို့ တကယ်စမ်းသပ်ပြီးမှ ရမရပြောလို့ရမယ့်အနေအထားမှာရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထုတ်ပေးထားတဲ့ Normal SIM တွေအနေနဲ့
၁၅သိန်းဖုန်းအစပိုင်းက ထုတ်ပေးထားတဲ့ SIM တွေက နာနိုဆင်းမ် အဖြစ်ဖြတ်လို့မရပါဘူး…
ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း ၀၉၅၄လောက်မှာထုတ်ပေးတဲ့ Normal SIM တွေကိုတော့ နာနိုအဖြစ် ဖြတ်လို့ရနိုင်တဲ့အရွယ်အစားရှိပါတယ်…
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ နာနိုအရွယ်ဖြတ်ပြီးရင် ကော်ပတ်နုနုလေးနဲ့ SIM နောက်ကြောဘက်ကနေ ပွတ်ပြီးပါးလို့ရပါတယ်…
၁၅% ဆိုတာက ဘယ်လောက်မှမသိသာတဲ့အနေအထားပါ… စွန့်တော့စွန့်စားရမည်ပေါ့… အိုင်ဖုန်းဖိုက်လက်ထဲရောက်လာလို့…
ရှိတဲ့ SIM နဲ့အဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားပြီးမှ အကြောင်းပြန်ပါ့မယ်…
အိမ်က မိန်းမ စိတ်ချမ်းသာအောင် ဘယ်လိုနေမယ်
သူမကြိုက်တာ ဘယ်လိုလေးပြင်မယ်ဆိုတာတော့ မစဉ်းစားဘူး
မိန်းမ မကြိုက်တဲ့ ပိုက်ဆံအများကြီး ကုန်အောင် ဖုံးအသစ်ဝယ်
သူ့ထဲ ထည့်ဘို့ဟာလဲ ရအောင်ဖြတ် နဲနဲပါးဘို့ ကော်ပတ်စား လုပ်ဘို့ ကြ
ဆင်းမ်ကတ်ကို ညှပ်ပီးရင် တနေလောက် ပြလိုက်ဗျာ..
၁၅% ဆိုတာ ပါးပါးလေးပါအေ…
ဆီလေးစွတ်ပီး ထည့်ရင် ၀င်ပါတယ်…
တော်ပါပြီးအေ ကိုယ့်ဟာကို ဟာဝေး ၈၆၀၀ မော်ဒယ် အနိမ့်လေးပဲကောင်းပါတယ်.. ပန်းသီး ကိုက်ရတာ တစ်ကိုက် ကိုက်လိုက် လွှင့်ပစ်လိုက်နဲ. မတန်ပါဘူးအေ…………
ဟို ကြောင်ပိတ္တာကြီး ဆို တကိုက်ကိုက်လိုက် လွှင့်ပြစ်လိုက်နဲ. အခုတော့ အိမ်ဂရမ်တောင် ပေါင်ထားရပေါ့……. ခိခိခိ…….
နောက် ပန်းသီး ၆ ထွက်လာရင် သူ.ယောက္ခမ အိမ် ပေါင်ဖို. ညှိနေတယ်……… အမလေး သဲ ရယ် ချိတ်ညစ်ထာအေ……
iPhone5ကိုင်မဲ့သူတွေ ၊ iPhone5အတွက် Untethered Jailbreak မရှိမှာ
စိုးရိမ်နေကြတဲ့သူတွေအတွက် iPhone5အတွက် Cydia Jailbreak အောင်မြင်ကြောင်း
iOS 5.1.1 မှာ Untethered Jailbreak ထွက်ရှိဖို့ လအတော်တန်ကြာ စောင့်စားခဲ့ရတဲ့အတွက်
iOS 6.0 ကို စတင်သုံးစွဲနေတဲ့သူတွေ ၊ iPhone5အသုံးပြုမဲ့သူတွေအတွက် iOS 6.0
အတွက် untethered Jailbreak မရှိမှာအတွက် တော်တော်လေး စဉ်းစားလာရပါတယ်။
အခုဆိုရင် Grant Paul ( chpwn ) ၇ဲ့ ပြောကြားချက်နဲ့ တရားဝင်ဖော်ပြမူအရ
တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြလာတဲ့အတွက် iOS 6.0 စတင်သုံးစွဲနေသူတွေနဲ့ ၊ iPhone5ကို
ကိုင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားသူတွေအတွက် သတင်းကောင်းလေး တစ်ခုအနေနဲ့အသိပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ……
အင်း.. အိုင်ဖုံး ဖိုက် ကတော့ အတန်းအစားတခု ခွဲခြားပေးခဲ့ပြီ …
ကျုပ်အဖို့ အလှမ်းဝေးလွန်းနေတယ် …
မိဘတွေလဲ သားသမီးတွေ နားပူနားဆာလုပ်ခြင်း ခံရဖို့ ရှိနေကိန်းမြင်သဗျား ….။
အော် … အနိစ္စ …။